ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိဖတ်ရှုချက်များနှင့်ဝီကီမန်း၏သုံးသပ်ချက် | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 11, 2007 တနင်္လာနေ့မတ်လ 12, 2007 Douglas Karr
Wikinomics ဟာအင်ဒီယာပိုလိစ် (Indiana Book Mashup) စာအုပ်အတွက်ငါဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ပါ။ ငါတကယ်တစ်လအကြောင်းကိုစာအုပ်နှင့်အတူအမှုကိုပြုခံရဖို့ထင်နှင့်အတူရရန်ထင်ခဲ့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘော်ရီဂျင်နီ.
ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ဤစာအုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ဖြစ်သည်၊ အချို့သောသူများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်လုံးဝသဘောမတူနိုင် အစ္စရေး Shel (စာအုပ်ရဲ့သူ။ ) အဝတ်အချည်းစည်းစကားပြောဆိုမှုများ ငါ့ကိုဘလော့ဂ်ကိုပို့ဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်၊ Wikinomics ကိုချစ်တယ်! ငါတကယ်ကအပေါ်နှင့်အပေါ်ဆွဲငင်ထင်ခဲ့တယ်။
ငါသည် Don Tapscott ကိုအလွန်လေးစားသည်။ သူသည်စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာလောကတွင်အခိုင်အမာတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီစာအုပ်ကတကယ့်ကိုခက်ခဲရှုပ်ထွေးပြီးလူသားတွေအနေနဲ့ငါတို့ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့ခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ရေထဲကိုတက်နေပြီဆိုလျှင် Social Networking သည်ငါတို့သိသည့်အတိုင်းကမ္ဘာ၊ စီးပွားရေး၊ ဒီမိုကရေစီ၊ စီးပွားရေး၊ ဒါဟာတော်လှန်ရေးပါ။
၎င်းသည်အာမခံစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကဲ့သို့ဖတ်သော်လည်း၎င်းသည်မှားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သောကြောင့်သင်အံ့အားသင့်သွားနိုင်သည် မဟုတ် ဤစာအုပ်ဝယ်ခြင်းနှင့်ဖတ်ရှုဖို့။ ၎င်းသည်ဝီကီလှုပ်ရှားမှုအားစေ့စပ်သေချာစွာလေ့လာခြင်းဖြစ်ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုမှုအဖြစ်အပျက်များကိုတစ်လျှောက်လုံးပျံ့နှံ့စေသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုထပ်မံဖတ်ရှုရန်လိုပါကအခန်း ၈ ကိုဖတ်ရှုရုံသာပြုသည်။ ဤစာအုပ်၏အသားသည်ဤအရပ်ဖြစ်၏။
အခန်း ၈ တွင်ဖော်ပြထားသည့်“ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်ရုံကြမ်းပြင်” သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးလိုက်နာရန်လိုအပ်သည့်နည်းဗျူဟာများကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည် အ စျေးကွက်သို့ယူရန်အကြံပေးသည် -
တစ် ဦး စိတ်အားထက်သန်အနာဂတ်နာရီစောင့်ရှောက်လော့
ငါ့ဆီ Wikinomics စာအုပ်မထည့်ဘူး အကြံပြုစာဖတ်စာရင်းအဓိကအချက်များကိုအိမ်သို့ရောက်စေရန်အတွက်စာအုပ်သည်များလွန်းလှသည် အခုငါ့နောက်ဖတ်ပါ ကြယ်ငါးပွင့်နှင့်ပင့်ကူ - ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့အစည်းများမတားဆီးနိုင်သောစွမ်းအား.
ငါပြီးပြီနီးပါး ပျံနေသည့်ဝက်၏ဥာဏ်ပညာ။ မည်သည့်ခေါင်းဆောင်မဆိုသူတို့၏ညနေခင်းသို့မဟုတ်စားပွဲခုံ၏ထောင့်ပေါ်တွင်ဝတ်ဆင်ရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စာအုပ်ဖြစ်သည်။ Jack Hayhow မှထင်ရှားသောခေါင်းဆောင်များနှင့်တူညီသည့်ထူးခြားသည့်အချက်များကိုရောင်စုံပုံပြင်များနှင့်လှုံဆော်သောကိုးကားချက်များဖြင့်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။